About - Grace Win
+95 1 820 3434
Mawlamyine Branch Office
Grace Win Company Limited was founded in 2011 asadistributor of pharmaceutical, medical & health care products throughout Myanmar. We are committed to providing quality, innovative & effective products into Myanmar. We believe in creating value by offering reliable products atareasonable price.
Grace Win isagrowing company currently carry wide range of best quality products primarily imported from India, Taiwan, Singapore, and Germany. Our popular products include Control+G, Gestrocid and Quadran.
We have four regional offices in Yangon, Mandalay, Mawlamyine and Pathein reaching nationwide. We look forward to building successful partnership with pharmaceutical and health care suppliers worldwide.
Grace Win Company Limited သည် 2011 ခုနှစ်ကစတင်၍ အခုချိန်ထိ ဆေးဝါးဆေးဖတ်ဆိုင်ရာနှင့် ကျန်မာရေးစောင့်‌ရှောက်မှု ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတကာမှ တင်သွင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းသို့ ဖြန့်ဖြူးရေး ‌ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည်။
Grace Win Company Limited သည် လက်ရှိတွင် အိန္ဒိယ၊ ထိုင်ဝမ်၊ စင်ကာပူ နှင့် ဂျာမဏီ တို့မှတင်သွင်းသော အရည်အသွေးကောင်းဆုံး ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာ အဓိက တင်သွင်းပါသည်။
အဓိကအားဖြင့် ဆေးဖတ်ဆိုင်ရာဆေးဝါးများ၊ လူတိုင်းအတွက် မရှိမရှိလိုအပ်သော အဟာရဖြည့်စွက် အားဆေးများ၊ ကျန်မာရေးစောင့်‌ရှောက်မှု အရည်အသွေးပြည့် စက်ကိရိယာများ ကို သင်တင့်မျှတသော စျေးနှုန်းများဖြင့် တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။
Grace Win Company Limited သည် ဆေးဝါးဆေးဖတ်ဆိုင်ရာနှင့် ကျန်မာရေးစောင့်‌ရှောက်မှု ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း 100 ကျော်ကျော်ကို FDA ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
ဤ ကုန်ပစ္စည်းများကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်၊ ပုသိမ်မြို့ တို့တွင်ရှိသော ရုံးခွဲများနှင့် အမြို့မြို့နယ်နယ်တွင် ရှိသော ဆေးဆိုင်များ၊ စတိုးဆိုင်များ တွင် အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
No.83, 3rd Floor, Yae Kyaw Road, Mingalar Taungnyunt T/S , Yangon.
+951-8203434, +951-8203082, +951-8297515
No.B-2, Corner of 33st & 82st, Chan Aye Thar Zan T/S ,Mandalay.
+952-4067445, +952-4030730, +959-402627887
No.16/A, Corner of Baho st & Dawei Su Zay st, Pabedan Qtr, Mawlamyine.
+9557-2024612, +9557-2026915, +959-954724612
No.1,9/B, Sagarwar St, Pathein.
+959-447725880, +959-447725881, +959-259067336
Copyright © Grace Win Company Limited | All rights reserved.